Trano Printy Finagonana Loterana
Ny IMPRIMERIE LUTHERIENNE
Boky fandinihina Soratra Masina
Kristy no torinay amin'ny asa printy
Katalôgin’ny Boky sy asa vokarin’ny TPFLM 2016Miarahaba anareo havana izay tsy mahasaraka ny Trano Printy Fiangonana Loterana Malagasyary faly indrindra manolotra anareo ity Katalôgy 2016 ity mba hanamorana ny fikarohana ny vokatra tadiavina sy ny fomba hahazoana izany. Ny TPFLM izay ho feno 140 taona tsy ho ela dia miezaka ny hihazona hatrany sy manandratra ny teny sy ny kolotsaina ary … Read more TSENAM – BOKYNy Mpikarakara ny fihaonambe an-tampony faha XVI ho an’nytany miteny Frantsay sy ny AEDIM, manolotra ho anao: ” TSENAM-BOKY ” ny boky sy ny kolotsaina marolafy ” ny faha 18 ka hatramin’ny faha 22 Aprily 2016 ho avy izao eo amin’ny “Esplanade Antaninarenina“. Ahitanao fanentana maro samihafa, Lalao, ary mpanakanto indrindra fa ny fihenam-bidy izay hatolotra … Read more Fihirana fotsy‘‘Fa Kristy no torinay amin’ny fanaovana Printy’’ Ny Trano Printy an’ny Fiangonana Loterana Malagasy (TPFLM) dia manolotra fihenam-bidy amin’ny Fihirana Fotsy Lehibe: 15 hatramin’ny 20% sy ny Fihirana Fotsy Salasalany: 5 hatramin’ny 10%. Koa ianareo izay haka antsinjarany na ambogadiny dia manatona ireto Toeram-pivarotamboky ireto: – Librairie Loterana eo amin’ny Esplanade sy eo amin’ny Select … Read more TIONA FFPMMiharahaba antsika mpitsidika ny tranokalan’ny TRANO PRINTY FIANGONANA LOTERANA MALAGASY (TPFLM). Misaotra an’Andriamanitra fa tontosa soa aman-tsara ny fanontana ny TIONA, edisiona fahefatra izay tsangambaton’ny faha 100 taonan’ny FFPM (1913 – 2013). Natao lehibe nohon’ny teo aloha ity Tiona ity, izany hoe “format A4”, mba hialana amin’ny tsy fahitan’ny mpitendry ny “solfa” amin’ny hira izay tendreny. … Read more Firariantsoa avy amin’ny TPFLM «Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika; Ary ny fanapahana dia eo an-tsorony, Ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra Mahery, Rain’ny mandrakizay Andrian’ny fiadanana». Isaia 9.5 Miarahaba antsika rehetra amin’izao andro lehibe manatantara amin’ny finoantsika Kristiana izao, dia ny fahatsiarovana ny fanomezan’Andriamanitra Ray an’i Jesosy Kristy Zanany, hamonjy antsika … Read more Andro tsy hisokafan’ny TPFLMRy mpanjifa, Hifarana tsy ho ela ny taona 2015. Nahitanay fahombiazana tanteraka ny fotoana rehetra niarahana taminareo. Fanomezana lehibe indrindra ho anay izay nataonareo tamin’ny fiarahantsika. Noho izany, ny ekipa rehetra ato amin’ny TPFLM, izay tarihin’ny Tale Pastora RANDRIANARIVELO Joseph, dia manolotra fisaorana sy fankasitrahana ary firariantsoa ho anareo tsy ankanavaka. Ny fankalazana ny fety … Read more Fanentanana fanokafana fivarotam-bokyFaneva: ” Fa Kristy no torinay amin’ny fanaovana printy”. Izay rehetra te-hanokatra fivarotam-boky (point de vente) dia: Afaka manokatra kaonty aty amin’ny Trano Printy Loterana Malagasy 2. Ny fanafarana ny entana voalohany sy faharoa ary ny fahatelo dia tsy mihoatra ny petra-bolan’ny mpanafatra ato amin’ny TPFLM. 3. Ny tombam-bidin’entana mihoatra ny 40 000Ariary amina karazan’entana … Read more Place aux LibrairesNy TPFLM dia nandray anjara tamin’ny hetsika “c’est la rentrée des libraires ” nokarakarain’ny Fikambanan’ny Tranomboky eto Madagasikara “ALM” tao amin’ny Institut Français de Madagascar( IFM), ny Asabotsy 24 Oktobra 2015 lasa teo. Ny mpivaro-boky tsirairay avy dia samy nanolotra ny zava-baovao farany tao aminy, fa ny an’ny TPFLM kosa dia ny asa-tanan’ Andriamatoa Lalao Rabenandrasana izay malaza mpanoratra eto amin’ny firenentsika, … Read more Tranokala vaovaoNy Trano Printy Fiangonana Loterana Malagasy dia faly mandray anao eto amin’ny tranokalany , Ny Tompo Jesosy no isaorana indrindra noho ny fahavitana izany satria izy no nanome ny TPFLM an’izy ity ahafahan-tsika mpanjifa sy mpiaramiasa rehetra miserasera , mahafantatra ny momba ny TPFLM, mahita ny vaovao ary ny entana rehatra misy ao aminy, Koa … Read more Teny isan´androAlahady faha XIII manaraka ny TriniteLioka 10: 33 - 37
33 Fa nisy kosa Samaritana anankiray nandeha tamin’ ny nalehany ka tonga teo aminy, ary nony nahita azy, dia onena.34 Dia nanatona izy, ka nofeheziny ny feriny, sady nasiany diloilo sy divay; dia nampitaingeniny tamin’ ny bibiny izy, ka nentiny ho any amin’ ny tranom-bahiny, dia notsaboiny.35 Ary nony ampitson’ iny, dia naka denaria roa izy, ka nomeny ny tompon’ ny tranom-bahiny, sady nanao taminy hoe: Tsaboy izy; ary na hoatrinona na hoatrinona no laninao mihoatra noho ireto dia honerako, rehefa miverina aho.36 Iza moa amin’ izy telo lahy no ataonao ho naman’ ilay azon’ ny jiolahy?37 Ary hoy izy: Ilay niantra azy. Dia hoy Jesosy taminy: Mandehana hianao, ka mba manaova toy izany koa.
Ny Asa´ Trano PrintyAsa printyIREO ASA-PRINTY LEHIBE. Ato amin’ity asa-printy lehibe ity no ahitana ireo Boky maro samihafa sy fihirana isan-karazany, dia ny fihiran’ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara (Fihirana F.F.P.M), izay avoakan’ny T.P.F.L.M. ary atonta printy ao aminy ihany koa. Maherin’ny 100 000 isa isan-taona no avoakan’ny T.P.F.L.M. amin’izany. Ao ihany koa ny Fihirana Katolika … Read more EdisionaIreo asa madinika ilain’ny tanan-dehibe. Ny T.P.F.L.M. dia tranom-pamoahana sy famokarana boky iarahana miasa amin’ireo mpanoratra maro samihafa. Maro karazana ihany koa ireo asa ampanaovin’ny olona an-tanan-dehibe ny T.P.F.L.M., toy ny “Reluire”, fanamboarana ireo “cartes” samihafa (carte de visite, carte de vœux, carte de présentation, karatra ampiasain’ny fikambanana samihafa,sns….). Ao ihany koa ireo taratasy fanasana … Read more Mampiely Ny T.P.F.L.M. dia manana ireo fivarotam-boky efatra( Ankoatry ny librairie Mobile) dia: NY FIVAROTAM-BOKY: SELECT ANALAKELY, ESPLANADE ANALAKELY, ANTANINARENINA, ary ANTSAHAMANITRA. Mba ho tsena hamarotany ireo vokatra vokariny. Araka izany ny Librairie dia rantsana iray ao amin’ny T.P.F.L.M. Ny fivarotam-baky dia efa nisy hatramin’zay sarahina eo amin’ny asa fanaovam-printy ny fanontana sy ny fampielezana. … Read more Katalogy Ny Fanabeazana tandrifyMpanoratra :Georgette RANDRIANARIMANANA3 600 AriaryJerana manontoloNoely MampifohaMpanoratra :Julien ANDRIANAIVOSOA2 200 AriaryJerana manontoloMofom-panahyMpanoratra :Mofom-panahy1 000 AriaryJerana manontoloMitoria ny FilazantsaraMpanoratra :Dr A. RAMIARAMANANA2 000 AriaryJerana manontoloManatratra ny LokaMpanoratra :Daniel GODFRIED1 700 AriaryJerana manontoloManatona ny fahazavanaMpanoratra :Daniel Gyane GODFRIED1 700 AriaryJerana manontoloLoharano MiafinaMpanoratra :G. E. BURTON2 400 AriaryJerana manontoloNy fon-janak’olombelonaMpanoratra :Nadikan'dRAZANAJOHARY1 700 AriaryJerana manontoloNy Teolojian’i LoteraMpanoratra :Dr CARL Fredrik5 300 AriaryJerana manontoloFa Mpamonjy no teraka ho anareo anioMpanoratra :RAJAONERA Clement Roger1 900 AriaryJerana manontoloDogmatika TsotraMpanoratra :J. TANNER3 300 AriaryJerana manontoloAndeha IzahaMpanoratra :Jean RABEMANAHAKA3 300 AriaryJerana manontoloFianarana Soratra Masina ho an’ny AnkizyMpanoratra :Rtoa Gura Trina AASLID2 900 AriaryJerana manontoloTezitra AndriamanitraMpanoratra :Jean BARISOLO1 700 AriaryJerana manontoloLamba sy Loko LitorjikaMpanoratra :Pastora Malvin TOMREN2 000 AriaryJerana manontoloEntana rehetra
WordPress Audio Player Facebook
Suivez-nous sur : © Trano Printy Flm 2015 Creation : Dfs toby Flm 67ha